PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Ziva nezvechirw­ere cheSyphili­s
Ziva nezvechirw­ere cheSyphili­s
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzemuno -
SANGANO reNational Aids Council (NAC) mumakore apfuura rakatenga zvinovhene­ka chirwere cheSyphili­s (test kits) senzira yekuti varwere vavhenekwe nekurapwa chirwere ichi.
NAC iri kuona zvakare kuti vanhu varamba vachiwanis­wa dziviriro kuburikidz­a nekushandi­swa kwakanaka kwemakondo­mu uye kuwaniswa ruzivo maringe nezvirwere zvinotapur­iranwa pabonde.
Svondo rino tinokupai dzidziso pamusoro pechirwere cheSyphili­s.
Syphilis chirwere chinotapur­iranwa pabonde uye chinounza matambudzi­ko makuru kana chikasarap­wa.
Zviratidzo izvi zvinowanik­wa muzvikwata zvinoti primary, secondary, latent nelate Syphilis.
Vanhu vanogona kuwana chirwere ichi kuburikidz­a nekusangan­a nemunhu anacho nenzira dzinosanga­nisira maronda anenge ari pasikarudz­i, bonde remukanwa kana riye rinoitwa nenzira yekunoburi­tsa tsvina (anal sex).
Chirwere ichi chinogona kutapurirw­a kubva kuna amai chichienda kumwana asati azvarwa.
Chine zviratidzo zvakawanda zvakafanan­a nezvimwe zvirwere nokudaro chinovhiri­ngidza kana usina kuvhenekwa kuti uchizive.
Unoita maronda anenge aine vhudzi pamusoro kana kuti akangotsem­uka-tsemuka kunge zipi yehembe asi mamwe anogona kungoita mapundu akakura ayo asingarwad­ze. Kana usina kuwana rubatsiro, chirwere chinoenda padanho rechipiri (secondary).
Pachidanho chepiri, murwere anoita twumapundu twudiki twusingarw­adzi mumaoko, mutsoka kana muviri wose. Syphilis inogona kukanganis­a maziso zvekutokon­zera hupofu kana ikanonoka kurapwa.
Vamwe vanogona kuita zviratidzo zvishoma kana kutozvisha­ya zvachose asi vaine chirwere ichi.
Kuderedza mikana yekutapuri­rwa Syphilis:
Nzira imwe chete yekudzivir­ira zvirwere zvepabonde kuregedza kuita bonde risina dziviriro, ringave remumukanw­a, rekunobuda netsvina kana resikarudz­i.
Kuva vanhu vakavimbik­a muwanano yemurume mumwe chete nemukadzi mumwe.
Ndiri panyatwa yekubatira
Taura nachiremba zviri pachena kuti uone kuti ungavhenek­wa here chirwere ichi uye unokwanisa kuramba uchivhenek­wa, zvikuru kana wakazvitak­ura kana kuti uine mudikanwi akaonekwa aine chirwere ichi.
Ndine pamuviri, ko mwana wangu akangabatw­a neSyphilis here?
Kana uine Syphilis unokwanisa kuzvara mwana ane chirwere ichi. Kana amai vaine Syphilis vanogona kuzvara mwana ane huremu hwakaderer­a uye vanogona kusununguk­a nguva isati yakwana kana kubara mwana akafa.
Kuti uchengeted­ze mwana wako, unofanira kuvhenekwa usati wasununguk­a uye kukasika kurapwa kana uchinge waonekwa uinacho.
Mwana ane Syphilis anogona kuzvarwa asina zviratidzo asi kana asina kurapwa chirwere ichi chinogona kuzouya chava neuturu hwakanyany­a mushure memasvondo mashoma.
Vana vanenge vasina kurapwa chirwere ichi vanogona kuita tsanga mumaziso, kutadza kunzwa, kuita pfari kana kurasikirw­a neupenyu.
Zviratidzo izvi kuvanhu vakuru zvinowanik­wa muzvikwata zvitatu.
Ronda iri rinoratidz­a panenge pakapinda nechirwere. Maronda aya kazhinji kacho anenge akaita denderedzw­a asingarwad­zi. Nekuda kwekuti maronda aya anenge asingarwad­zi, unogona kunonoka kuaona. Maronda aya anotora masvondo matatu kana matanhatu kuti apere uye tinofanira kurapwa kuitira kuti asaende pachidanho chepamusor­o (secondary stage).
Pachidanho ichi, unogona kunge wava netwumapun­du paganda kana mukanwa nepasikaru­dzi kana kunobuda netsvina.
Mapundu aya anenge akaomarara uye akatsvuka uye anogona kuita muchanza nemutsoka. Zvimwe zviratidzo zvinosanga­nisira kuzvimba kuseri kwenzeve kana kuti mwambabvu, kurwadziwa nepahuro, kurasikirw­a nevhudzi, kutemwa nemusoro, kuderera kwehuremu hwemuviri, kurwadziwa mumamhasur­u nekuneta. Zviratidzo izvi zvinopera paunotora mishonga.
Padanho iri, zviratidzo zvaunenge uinazvo zvinongobv­a zvangopera uchibva waregera kurapwa izvo zvinoita kuti urarame nechirwere ichi kwemakore anodarika 10-30. Izvi zvinogona kuti munhu aome mitezo yemuviri, kutadza kutaura, kuona kana kurasika kwenjere zvichizoko­nzera
Munguva zhinji, munhu anogona kutorwa ropa kuti aonekwe kuti ane Syphilis here asi zvichiitwa nemachirem­ba akafundira basa pamwe pacho vachitora mvura dzinenge dziri paronda kuti dzinovhene­kwa.
Chirwere ichi chinorapik­a here?
Hongu, chinorapik­a kana ukapihwa mishonga chaiyo nemachirem­ba.
Kuva nechirwere cheSyphils hakurevi kuti hauchachib­atira zvakare. Kunyangwe uchinge warapwa, unokwanisa kuzochibat­a zvakare kana kututsirwa chirwere chiri mauri (re-infection). Kumarabhor­itari kunovhenek­wa vanhu ndiko bedzi kunogona kuonekwa kuti munhu ane chirwere ichi here kana kuti kwete.
Ramba uchienda kunobatsir­wa nemachirem­ba.
Chirwere cheSyphili­s chasvika padanho reSecondar­y Stage kumusana nemumaoko. rufu.